ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် အာဆီယံ နာဂစ် ခုနစ်နှစ် ပြည့်ခဲ့ပြီ... တာချီလိတ်မြို့တွင် အသတ်ခံရသည့် အမျိုးသမီးအမှုမှ ကျူးလွန်သူအား တစ်လကျော် ကြာသည်အထိ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း မရှိသေး ‘၀’ ဒေသ ပန်ဆန်းမြို့ဝန်းကျင်ရှိ အင်္ဂလိပ်ခေတ်က ဘိန်းစတင်စိုက်ပျိုးခဲ့သော ဒေသအား ခရီးသွားများ လေ့လာလည်ပတ်နိုင်သည့် နေရာအဖြစ် ပြုလုပ်သွားရန် စီစဉ်နေ အလုပ်ရှင်က ၄၀၀၊ လူတန်းစေ့မနေရတဲ့ လုပ်သားက နှစ်သိန်းကျော်၊ တစ်ရက်လုပ်ခ ကျပ် ၁၅၀၀ ပဲ ပေးချင်တယ် ဆိုတာကတော့ . . . နိုင်ငံရေး သတင်းများ
ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် အာဆီယံ KNU တပ်မဟာ (၂) နှင့် တပ်မဟာ (၅) အကြား အစိုးရတပ်မတော်၏ လေကြောင်းမှ ကျည်ကျရောက်မှုဖြစ်ပွား တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်ရပ်စဲရေးစာချုပ်မူကြမ်းအား တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ပေါင်းစုံ၏ သဘောထားဖြင့် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ပြီး အစိုးရနှင့် ပြန်လည်ဆွေးနွေးရမည်ဆိုသည့်အချက်ကို NCCT အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ရှင်းပြ နိုင်ငံနှင့် အများပြည်သူအတွက်ဆိုပါက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ယနေ့၊ မနက်ဖြန်နှင့် အနာဂတ်အထိ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် အသင့်ရှိဟု သူရဦးရွှေမန်း ပြောကြား User login
မေလ ၄ ရက်နေ့ထုတ် Weekly Eleven News Journal မျက်နှာဖုံး
Tweets by @eleventweet နာဂစ် ခုနစ်နှစ် ပြည့်ခဲ့ပြီ... ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် အာဆီယံ ‘၀’ ဒေသ ပန်ဆန်းမြို့ဝန်းကျင်ရှိ အင်္ဂလိပ်ခေတ်က ဘိန်းစတင်စိုက်ပျိုးခဲ့သော ဒေသအား ခရီးသွားများ လေ့လာလည်ပတ်နိုင်သည့် နေရာအဖြစ် ပြုလုပ်သွားရန် စီစဉ်နေ မုံရွာ-ယာကြီး-ကလေးဝ-မော်လိုက်လမ်းတွင် မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ လမ်းခြောက်အောင်စောင့်ဆိုင်းပြီး သွားလာနေရ အလုပ်ရှင်က ၄၀၀၊ လူတန်းစေ့မနေရတဲ့ လုပ်သားက နှစ်သိန်းကျော်၊ တစ်ရက်လုပ်ခ ကျပ် ၁၅၀၀ ပဲ ပေးချင်တယ် ဆိုတာကတော့ . . . ကချင်ပြည်နယ် ကန်ပိုင်တည်မြို့အနီးမှ တရုတ်နိုင်ငံ ထိန်ချုံးခရိုင် ကူရုံးမြို့ဘက်သို့ တစ်ရက်လျှင် သစ်တန် တစ်ရာကျော် ခိုးထုတ်နေဟု ဒေသခံများ ပြောကြား ၁၃၇၇ ခုနှစ် ကဆုန်လပြည့် (ဗုဒ္ဓနေ့) တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ တန်ခိုးကြီးဘုရားစေတီများတွင် ညောင်ရေသွန်း ကုသိုလ်ယူသူများဖြင့် စည်ကား Eleven TV
ပြည်သူတွေရင်ထဲက မေ့... တာချီလိတ်တွင် အသတ်ခ... ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရံ... ကျပ်သိန်း ၂၀၀ ဆုတစ်... “ဝ” ဒေသ ပန်ဆန်းမြို... မကွေးတိုင်းမြို့နယ်... ကျောင်းဆရာနှင့် စာသင်ခန်း
စနစ်သစ်ပညာရေး ဥပဒေသည် နှစ်ပေါင်းငါးဆယ် မုန့်လုံးစက္ကူကပ်လာခဲ့သော ဥပဒေဟောင်းကြီးကို ဖုန်ခါပြီးပြန်ပြသော ဥပဒေမျိုး မဖြစ်သင့်ပါ။ ခေတ်ပြောင်း၊ စနစ်ပြောင်းသွားပြီမို့ ပညာရေးလည်း ပြောင်းရမည်ဖြစ်၏။ နှစ်ပေါင်း ငါးဆယ်၊ တက္ကသိုလ်၌ စာသင်ပြီး ပညာတတ်များ မွေးထုတ်ပေးခဲ့သော်လည်း ထိုဘွဲ့ရများသည် လူ့လောကနှင့် နေသားကျမှုမရှိသည့်အပြင် မိမိသင်ကြားလာသော ပညာရပ်များကို ဘာမှမသိကြပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ ဘွဲ့ရပညာတတ်များ အရည်အသွေး မပြည့်မီသောကြောင့် နှစ်ပေါင်း ၅၀ အတွင်း အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သွားခဲ့ပါ၏။ ဒါသည် အရှိတရားဖြစ်သည်။ သို့ဆိုပါလျှင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂတ်သည် ယနေ့စာသင်ခန်းထဲမှ ကျောင်းသားလူငယ်များအပေါ် လုံးဝတည် Read more about ကျောင်းဆရာနှင့် စာသင်ခန်း
သေနင်္ဂဗျူဟာစစ်၏ အင်္ဂါ၊ စစ်ချီ၊ စစ်တက်၊ စစ်ထိုး၊ စစ်ခံ၊ တကယ့် ယောက်ျားဆိုတဲ့သီချင်း နားထောင်ဖူးပါတယ်။ နောက် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးအကြောင်း ဖတ်ဖူးမှတ်ဖူးလာတော့ မဟာဗျူဟာ၊ နည်းဗျူဟာရယ် နှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ သိလာရပါတယ်။
Read more about အချိန်ဆွဲ ဗျူဟာ
“ဝ” ဒေသ ပန်ဆန်းမြို့ (ပန်ခမ်း) ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အင်္ဂလိပ်ခေတ်က ဘိန်းစတင်စိုက်ပျိုးခဲ့သည့် ဒေသအား ခရီးသွားများ လေ့လာလည်ပတ်နိုင်မည့် နေရာအဖြစ် ပြုလုပ်သွားရန် စီစဉ်နေဟုဆို
Read more about “ဝ” ဒေသ ပန်ဆန်းမြို့ (ပန်ခမ်း) ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အင်္ဂလိပ်ခေတ်က ဘိန်းစတင်စိုက်ပျိုးခဲ့သည့် ဒေသအား ခရီးသွားများ လေ့လာလည်ပတ်နိုင်မည့် နေရာအဖြစ် ပြုလုပ်သွားရန် စီစဉ်နေဟုဆို
ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ (MNDAA) နှင့် ပတ်သက်သော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များအား သတင်းမီဒီယာများတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်း မပြုရန် တပ်မတော် သတိပေး
ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ (MNDAA) ၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များအား သတင်းမီဒီယာများတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြမှု မရှိစေရေးနှင့် ပတ်သက်၍ မေ ၃ ရက်တွင် တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က မြန်မာနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်းကောင်စီ (ယာယီ) သို့ အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ Read more about ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ (MNDAA) နှင့် ပတ်သက်သော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များအား သတင်းမီဒီယာများတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်း မပြုရန် တပ်မတော် သတိပေး
နီပေါတွင် ငလျင်ကြောင့် သေဆုံးသူ ၇၂၀၀ ကျော်လာချိန်၌ ကြိုးနီစနစ်ကြောင့် အကူအညီရရှိမှု နှေးကွေး
နီပေါနိုင်ငံ၏ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အာဏာပိုင်များသည် ငလျင်ဒဏ်သင့် ပြည်သူတို့အတွက် အကူအညီများကို နှေးကွေးစွာ ပေးဝေနေသဖြင့် အလွန်စိုးရိမ်မိသည်ဟု ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူက ပြောကြားခဲ့သည်။ တစ်ဘက်တွင်လည်း နီပေါတွင် လှုပ်ခတ်ခဲ့သည့် အင်အားပြင်းငလျင်ကြီးကြောင့် သေဆုံးသူဦးရေမှာ မေ ၃ ရက်တွင် ၇၂၀၀ ကျော်သွားပြီဖြစ်သည်။မြို့တော်ခတ္တမန္ဒူရှိ အပျက်အစီးများအောက်တွင် အသက်ရှင်လျက်ရှိသူများ ထပ်မံရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မည်ဆိုသည့် မျှော်လင့်ချက်ကို အာဏာပိုင်များက စွန့်လွှတ်လိုက်ကြပြီးနောက် ငလျင်ဒဏ်သင့်ဒေသမှ မိသားစုများထံသို့ အကူအညီများ ပေးဝေရေးကို ဦးတည်လုပ်ဆောင်နေကြသည်။ Read more about နီပေါတွင် ငလျင်ကြောင့် သေဆုံးသူ ၇၂၀၀ ကျော်လာချိန်၌ ကြိုးနီစနစ်ကြောင့် အကူအညီရရှိမှု နှေးကွေး
တာချီလိတ်မြို့တွင် အသတ်ခံရသည့် အမျိုးသမီးအမှုမှ ကျူးလွန်သူအား တစ်လကျော် ကြာသည်အထိ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း မရှိသေး
မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ် ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း တာချီလိတ်မြို့တွင် အသတ်ခံရသည့် အသက်ခြောက်နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်၏အမှုမှ ကျူးလွန်သူအား တစ်လကျော် ကြာမြင့်သည်အထိ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း မရှိသေးကြောင်း မေ ၃ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် သက်ဆိုင်ရာ မြို့မရဲစခန်းမှ စုံစမ်းသိရသည်။ Read more about တာချီလိတ်မြို့တွင် အသတ်ခံရသည့် အမျိုးသမီးအမှုမှ ကျူးလွန်သူအား တစ်လကျော် ကြာသည်အထိ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း မရှိသေး
ပက်ကီယောင်းကို အမှတ်ဖြင့် အနိုင်ယူပြီး မေ၀ယ်သာ ၄၈ ပွဲဆက် ရှုံးပွဲမရှိစံချိန် ထိန်းသိမ်း WBA (စူပါ)နှင့် WBC ခါးပတ်များ ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပြီး WBO ခါးပတ်ကိုပါ ရယူနိုင်ခဲ့
ရာစုနှစ်၏ အကောင်းဆုံးလက်ဝှေ့ပွဲဟု သတ်မှတ်ခံထားရသည့် အမေရိကန် လက်ဝှေ့သမား ဖလွိုက်မေ၀ယ်သာနှင့် ဖိလစ်ပိုင် လက်ဝှေ့သမား ပက်ကီယောင်းတို့၏ ပွဲစဉ်ကို အမေရိကန်နိုင်ငံ လတ်စ်ဗီးဂတ်စ်မြို့ရှိ MGM Grand Garden Arena ၌ (မြန်မာစံတော်ချိန်) မေ ၃ ရက် နံနက်ပိုင်းက ကျင်းပခဲ့ရာ မေ၀ယ်သာက အမှတ်ဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ Read more about ပက်ကီယောင်းကို အမှတ်ဖြင့် အနိုင်ယူပြီး မေ၀ယ်သာ ၄၈ ပွဲဆက် ရှုံးပွဲမရှိစံချိန် ထိန်းသိမ်း WBA (စူပါ)နှင့် WBC ခါးပတ်များ ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပြီး WBO ခါးပတ်ကိုပါ ရယူနိုင်ခဲ့
နီပေါငလျင်နဲ့ ဧ၀ရတ် နည်းပညာ
လွန်ခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်အကုန်က ဧ၀ရတ်တောင်ကနေ ရေခဲတွေပြိုကျတော့ လမ်းညွှန်တွေက Twitter ကနေ အကူအညီတောင်းပြီး ဗီဒီယိုဖိုင်တွေ တင်လိုက်တဲ့အခါ အလျင်အမြန် ပျံ့နှံ့သွားခဲ့တယ်။ ခြေလျင်တောင်တက်သမားတွေဟာ ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးနေရာမှာ Wifi သုံးနိုင်ကြတာကိုး။လွန်ခဲ့တဲ့ ၆၂ နှစ်တုန်းကတော့ အက်ဒမွန်ဟီလာရီနဲ့ တန်ဇင်းနော်ဂေးတို့ ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး တောင်ထိပ်ကိုရောက်တော့ နောက်ထပ်လေးရက်ကြာတဲ့အထိ ပြင်ပကမ္ဘာကို သတင်းတွေ မရောက်ခဲ့ဘူး။ တောင်ထိပ်မှာ ဟီလာရီတစ်ယောက် ဘာဓာတ်ပုံမှလည်း မရိုက်ခဲ့ရဘူး။ Read more about နီပေါငလျင်နဲ့ ဧ၀ရတ် နည်းပညာ
လျာထားချက်ကျော်လွန်ခြင်း မရှိသော်လည်း မြ၀တီနယ်စပ်မှ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ယခင်နှစ်ထက် ဒေါ်လာ ၁၈၉ သန်းကျော် ပိုမိုကုန်သွယ်နိုင်ခဲ့
ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် ကုန်သွယ်မှု အများဆုံးဖြစ်သော မြ၀တီနယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးမှ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် လျာထားချက်ကို ကျော်လွန်ခဲ့ခြင်း မရှိသော်လည်း ယခင်နှစ်ကထက် ဒေါ်လာ ၁၈၉ သန်းကျော် ပိုမိုကုန်သွယ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် ထိစပ်နေသော နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး စခန်းများဖြစ်သည့် မြ၀တီ၊ တာချီလိတ်၊ ကော့သောင်း၊ မြိတ်၊ နဘုလယ်၊ ထီးခီး၊ မောတောင် စသည့် နယ်စပ်များအနက် မြတီနယ်စပ်စခန်းမှ အများဆုံး ဒေါ်လာ ၄၄၇ သန်းကျော် ကုန်သွယ်မှု ပြုနိုင်ခဲ့ကြောင်း ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စားသုံးသူရေးရာဌာနမှ သိရသည်။ Read more about လျာထားချက်ကျော်လွန်ခြင်း မရှိသော်လည်း မြ၀တီနယ်စပ်မှ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ယခင်နှစ်ထက် ဒေါ်လာ ၁၈၉ သန်းကျော် ပိုမိုကုန်သွယ်နိုင်ခဲ့
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်မှုသည် ရှေ့ဆက်သွားရန် အများကြီး လိုသေးကြောင်း ကမ္ဘာ့စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ အခမ်းအနားတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်မှုသည် ရှေ့ဆက်သွားရန် အများကြီးလိုသေးကြောင်း ၂၀၁၅ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ အခမ်းအနားတွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားသည်။ Read more about မြန်မာနိုင်ငံ၏ စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်မှုသည် ရှေ့ဆက်သွားရန် အများကြီး လိုသေးကြောင်း ကမ္ဘာ့စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ အခမ်းအနားတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား
“ဝ” ဒေသ ပန်ဆန်းမြို့ (ပန်ခမ်း) ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အင်္ဂလိပ်ခေတ်က ဘိန်းစတင်စိုက်ပျိုးခဲ့သည့် ဒေသအား ခရီးသွားများ လေ့လာလည်ပတ်နိုင်မည့် နေရာအဖြစ် ပြုလုပ်သွားရန် စီစဉ်နေဟုဆို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ (MNDAA) နှင့် ပတ်သက်သော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များအား သတင်းမီဒီယာများတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်း မပြုရန် တပ်မတော် သတိပေး တာချီလိတ်မြို့တွင် အသတ်ခံရသည့် အမျိုးသမီးအမှုမှ ကျူးလွန်သူအား တစ်လကျော် ကြာသည်အထိ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း မရှိသေး မြန်မာနိုင်ငံ၏ စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်မှုသည် ရှေ့ဆက်သွားရန် အများကြီး လိုသေးကြောင်း ကမ္ဘာ့စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ အခမ်းအနားတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား စီးပွားရေး သတင်းများ
လျာထားချက်ကျော်လွန်ခြင်း မရှိသော်လည်း မြ၀တီနယ်စပ်မှ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ယခင်နှစ်ထက် ဒေါ်လာ ၁၈၉ သန်းကျော် ပိုမိုကုန်သွယ်နိုင်ခဲ့ ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း၏ ငွေပေးချေစာရင်း ရှင်းလင်းမှုဘဏ်အဖြစ် ထိပ်တန်းအခွန်ဆောင်စာရင်းဝင် ကမ္ဘောဇဘဏ်အား ရွေးချယ် နိုင်ငံတကာငွေကြေးများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ရာတွင် မြန်မာငွေတန်ဖိုး တစ်ပတ်အတွင်း သိသာစွာကျဆင်းလာ အာဆီယံစီးပွားရေး အသိုက်အ၀န်း စတင်ချိန် မြန်မာ့အိမ်ခြံမြေ ဈေးကွက်အတွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး ရုံးခန်းနေရာများအတွက် တောင်းဆိုမှုများ မြင့်တက်နိုင် နိုင်ငံတကာ သတင်းများ
နီပေါတွင် ငလျင်ကြောင့် သေဆုံးသူ ၇၂၀၀ ကျော်လာချိန်၌ ကြိုးနီစနစ်ကြောင့် အကူအညီရရှိမှု နှေးကွေး နီပေါငလျင်ကြောင့် သေဆုံးသူဦးရေ ၂၅၀၀ ကျော်အထိ မြင့်တက်လာ နီပေါ၌ အင်အားပြင်းငလျင်ကြီး လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက် လူ ၁၄၀၀ ကျော်သေဆုံး အီသီယိုးပီးယား ခရစ်ယာန်များအား လစ်ဗျားတွင် ကွပ်မျက်မှုကို ရိုက်ကူးထားသည့် ဗီဒီယိုအား IS အဖွဲ့ ထုတ်ပြန် အယ်ဒီတာ့ အာဘော်
မေလ ၃ ရက်နေ့ထုတ် The Daily Eleven သတင်းစာ၏ အယ်ဒီတာ့အာဘော် မေလ ၂ ရက်နေ့ထုတ် The Daily Eleven သတင်းစာ၏ အယ်ဒီတာ့အာဘော် မေလ ၁ ရက်နေ့ထုတ် The Daily Eleven သတင်းစာ၏ အယ်ဒီတာ့အာဘော် ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့ထုတ် The Daily Eleven သတင်းစာ၏ အယ်ဒီတာ့အာဘော် ဧပြီလ ၂၉ ရက်နေ့ထုတ် The Daily Eleven သတင်းစာ၏ အယ်ဒီတာ့အာဘော် ဧပြီလ ၂၈ ရက်နေ့ထုတ် The Daily Eleven သတင်းစာ၏ အယ်ဒီတာ့အာဘော် Home